I-Gladiolus - enye yeentyatyambo ezintle ezivela kwiinjongo zezityalo ezinobhubhane. I-Gladiolus ikhulile ngoncedo lweibhubhu, zicatshulwa ngonyaka, kwaye zigcinwe. Ukususela ekuvuneni okufanelekileyo kunye nendlela olungiselele ngayo ukugcinwa kwebhubhu, ukhuseleko lwezibilini zeibhola ze gladiolus zixhomekeke.
Ukugcina ama-buldiololus bulbs
Ikhadibhodi kunye neebhokisi zokhuni;
Iiswele okanye isandla esibukhali;
Plywood okanye iplanga;
Iifolo okanye ifosholo.
Emva kweentsuku ezingama-30, emva kwe-gladiolus ottsvet, kwimozulu eyomileyo igalela ama-bulbs. Iindidi ezahlukeneyo ze-gladiolus zisuswe ngamaxesha ahlukeneyo, ngoko iimeko eziqhakazile ziya kuhluka. Iintlobo zokuqala ziqhakaza iintsuku ezingama-60 ngaphambi kweentlobo ezidlulileyo, ngoko kuvuna ama-tuber bulbs kufuneka ayenziwe emva kokuba sele ephelile. Ukuba ukhiqiza iinqumlezo ezinkulu zeentyatyambo, ngoko kwinyanga kufuneka udle ii-bulbs. Ngeli xesha, i-bulb bulbhu iyavuthwa ngokupheleleyo nakuphi na uhlobo.
Imibala emnyama ye-gladioli - obomvu, igazi elibomvu, elibomvu, i-burgundy, i-cherry, i-tuber bulb ivuthwe ngeveki ngaphambilithuba emva kokuba ixesha leentyantyambo okanye emva kokunciphisa ubuninzi. Ukucoca kwabo kufuneka kwenziwe kwimihla engama-23, kwaye kungekhona kwinyanga, ukuba bayagcinwa emhlabathini, oku kuya kubangela ukubola kunye nezilonda. Izinto ezinjalo zokutyala ziya kuba zibi kakhulu. Izilwanyana zeebhula ezikhulile ukusuka kwintlanzi yokutshala kwiibhubhu zigqitywa ekugqibeleni.
Iibhubhu zicatshulwa ngefosholo okanye iifom. Ngama-tubers kufuneka udibanise umhlaba. Susa zonke izinto ezibolileyo kunye ezilimele. Ukwandisa ii-bulbs kwiplywood okanye iplanki. Ngesiqhe okanye isandla esibukhali, unqume iziqu, ushiye i-2 cm, uqoke iingcambu, uhlukanise ama-corms endala, kuba i-gladiolus sele ikhulile kuyo. Ukuba ayikwazi ukukhawulwa ngokukhawuleza, zonke izinto kufuneka zifakwe kwinqanaba elingaphantsi kombhobho, kwaye ukususwa kufuneka kuphindwe emva kweentsuku eziyi-15.
Emanzini ajikelezayo, hlambulula zonke izinto, uhlaziye isisombululo kwisisombululo se-chlorophos, wongeza iigrimu zamanzi ukuya kwi-20 grams ye-chlorophos okanye kwisisombululo esinamandla se-potassium permanganate. Emva koko usasaze iipilisi ukuba zome ngaphantsi komtya weentsuku ezili-15, uze ulethe onke ama-tuber bulbs kwigumbi elifudumeleyo. Ukuba imozulu imanzi okanye iqhwa sele iqalile, kufuneka ukuba ukomile kwenziwe ngaphakathi.
Hlela ngohlobo lwee-tubers ze-gladiolus bulb, zifake kwiibhokisi zekhadibhodi okanye iibhokisi zokhuni. Uwagcine kwindawo ebumnyama nelomileyo kwiqondo lokushisa kwama-degrees ama-5 ukuya kuma-7 degrees. Ngethuba lebusika, hlaziya izinto kwaye ususe ama-bulbs aphangiweyo.
Ukuba uthengela izinto zokutyala esitolo, kufuneka uqaphele ubungakanani bombhobho. I-bulb enkulu kakhulu inokuba ngumdala okanye, ukuba ububanzi bomdaka bukhulu kunomhla wecenari enye, ngoko kwi-bulb unokufumana iipopu okanye le bulb. La ma bulb akhula kwaye ahlala ecula. Ngokuqinisekileyo, kufuneka ubeke ingqalelo ekubonakala kwayo, ngoko-ke ayinamabala kunye nomonakalo, kungekhona isicaba, kwaye uhambelana. Ingqimba yombhobho ikhuluma ngokutshatyalaliswa ngumnxeba okanye iminyaka ehloniphekileyo.
Eyona nto ibhetele ikhulile ukusuka kwintsana, kungeyikho imbali, i-bulb ye-parsing yokuqala, i-4 cm ngobukhulu. Lebhubhu iya kubanika abantwana, iya kuqhakaza kakuhle, kwaye ixesha lokuvuna liya kuba yiminyaka engama-6. I-bulb enkulu ye-bloom yesibili iya kunika abantwana abaninzi kunye neentyantyambo ezintle, kodwa ubomi balo bulb bungaphantsi konyaka. Okusemgangathweni yintlobo yokutyala, eyakhula kwisayithi yabantwana, inempahla ekhuselekileyo kwisifo kwaye isitishi semikhosi ebalulekileyo iphakamileyo kunee-bulbs. Ukongezelela, yile mhlaba ukuba zilungelelanise ngakumbi.
Ukutyala kwezityalo zangaphakathi, icebiso eluncedo
Indlela yokufaka izityalo zangaphakathi
Ukunyamekelwa kwezityalo ze-coniferous izityalo
Isobho esingafaniyo kunye nemissels
I-Sherbet kwi-raspberry kunye ne-strawberry
I-Pasta eneenyama enqabileyo
Amaqiniso angama-3 ngokumelene nesondo esingasigxina
I-mannik ye-Chocolate kwi-multivark
Indlela yokuhlobisa izibuko zomtshato
Alexey Panin, iindaba zakutsha nje
Ziyiphi i antibiotics engayisebenzisela abafazi abakhulelweyo?